पोखराको मतगणनामा विवाद
पोखरा महानगरपालिकाको मतगणनामा विवाद देखिएको छ । वडा नम्बर एकको मतगणनामा दलहरुबीच हिसाब नमिल्दा ५० मत पुन गनिन लागेको हो ।उता वडा नम्बर २ को मतगणनामा पनि विवाद भएको छ । सदर/बदरबारे विवाद हुँदा दुई नम्बर वडाको मतगणना रोकिएको छ ।
मोरङको लेटाङमा विवाद, सुकुम्बासी परिचयपत्रले विवाद
मोरङको लेटाङमा मतदानका क्रममा विवाद भएको छ । सुकुम्बासी परिचयपत्र भएकाहरुको नाममा भोट हाल्न खोज्दा विवाद भएको हो । मोरङका एसपी शान्तिराज कोइरालाले दुई पक्षीबीच भएको विवाद अहिले समाधान गरेर मतदान सुचारु गरिएको बताए ।लेटाङ ४ स्थित शान्ति भगवती मावि केन्द्रमा सो विवाद भएको हो। सुकुम्बासीको परिचय पत्र ल्याएका केही व्यक्तिले मनपरी रुपमा मत हाल्न खाजेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)भित्रको सबै विवाद सल्टिएको छ । मंगलबार संघका अध्यक्ष कुमार पन्त र पूर्वअध्यक्षबीच पनि सहमति भएपछि सबै विवाद समाधान भएको हो । सहमतिअनुसार मंगलबार शेष घलेले काठमाडौंस्थित होटेल याक...
विशाल बस्नेत/न्युज कारखाना : महोत्तरी, १४ फागुन । नेकपा एमाले महोत्तरीमा संगठनिक विवाद नसकिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि टिकटको विवाद सतहमा आएको छ । विवादकै कारण जिल्ला अधिवेशन समेत रोकिएका बेला पालिकाहरूमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाअध्यक्षका टिकटका दावेदारहरूबीच मनमुटाव सिर्जना भएको छ । टिकटको लागि स्वघोषणा गर्नेहरू र अनुमान गरिएको चर्चाका आधारमा विशेषगरी वर्दिबास बजारमा निक्कै […]
लण्डन– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाविधेशन प्रतिनिधि विवाद टुंगिएको छ । संघका सचिव गौरीराज जोशीका अनुसार संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंग्गाउन गठित उपसमितिको बैठकमा विवाद अन्त्य गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । ‘यदि कसैले बीचमा खेल खेलेन भने समितिभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंग्गो लागेको छ,’ जोशीले भने । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले गठन गरेको […]
काँग्रेसमा क्रियाशील विवाद सकियो
नेपाली काँग्रेसमा क्रियाशील विवाद सकिएको छ । मंगलबार रौतहटको क्रियाशील विवाद टुंगिएसँगै काँग्रेसमा क्रियाशील विवाद सकिएको हो । क्रियाशील विवादका कारण रौतहटका नेता कार्यकर्ता एकसय दिनभन्दा बढी समय पार्टी कार्यालयमा रिले अनसनमा बसेका थिए । सो विवाद टुंगिएसँगै उनीहरुले पनि अनसन तोड्ने तयारी गरेका छन् । वडा अधिवेशन हुन बाँकी १३ जिल्लामा काँग्रेस निर्वाचन समितिले निर्वाचन अधिकृत खटाइएको छ ।आगामी कात्तिक २७ गते सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुव
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पुनः विवाद भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भएको १० बुँदे सहमति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगरेपछि विवाद चर्किँदै गएको हो । गत २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एमालेभित्रको विवाद चर्किएको हो । पार्टी बैठकको एजेन्डा समेत १० बुँदे सहमति नबनेको र सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष ओलीले सो सहमति ‘अर्थहीन’ भएको टिप्पणी गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ
कांग्रेसले टुंग्यायो १० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद,१० जिल्लामा विवाद कायमै
नेपाली कांग्रेसले १० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुग्याएको छ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार विवाद रहेका २० मध्ये १० जिल्लाको विवाद समाधान गरेर सदस्यता प्रिन्ट गरिसकिएको छ। यसरी विवाद टुंगिएका...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको विवाद चर्किंदै गएपछि अब के हुने भन्ने विषयमा धेरैमा विभिन्न अनुमान र आशंका रहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो आमनेताकार्यकर्तामा रहेको देखिन्छ । ओली र नेपाल दुवै समूहको […] The post एमाले विवाद: होला एकता ? appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
एमाले विवाद मिलाउने कार्यदलमा को–को ?
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एक पटक आफ्नो राजनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्दै दलभित्रको विवाद मिलाउन सफल भएका छन्। दलभित्रको विवाद मिलाउँदा ‘उधारो सहमति गरिँदैन’ भन्दै अडान राख्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ओलीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न वाध्य भएका छन्। पार्टी विवाद टुंगाउने विषयमा सहमति बनेसँगै १० सदस्यीय कार्यदल बन्ने भएको स्रोतले जनाएको। कार्यदलमा शुरुमा विष्णु पौडेल संयोजक रहनेगरी तय भएको छ त्यसमा सुवास नेम्वांग, शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषालको नाम ट...